तुर्कमेनिस्तान - एउटा सानो देश मध्य एशिया, को कैस्पियन सागर को तट मा स्थित। तुर्कमेनिस्तान को आधिकारिक राज्य झण्डा बाहेक, त्यहाँ पनि देश को राष्ट्रपति को एक मानक छ। के तिनीहरूलाई देखाइएको छ? आफ्नो प्रतीक कसरी decipher गर्न?
तुर्कमेनिस्तान: सामान्य जानकारी
तुर्कमेनिस्तान को राज्य मध्य एशिया मा स्थित छ। उहाँले अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान र काजाकिस्तान घेरिएको छ। पश्चिम पक्षमा यो कैस्पियन सागर द्वारा धोए छ। को टिब्बा - मरुभूमि द्वारा कवर इलाका र मुख्य परिदृश्य यहाँ धेरैजसो। तर, यस्तो तेल, नेतृत्व, सल्फर, आयोडिन र लवण धेरै मूल्यवान खनिज, छन्। एक प्राकृतिक ग्याँस यो संसारमा चौथो रैंकों आरक्षण गर्छ।
यो तटस्थ सार्वभौम राज्य, 1991 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरियो। नियम को प्रकार द्वारा, देश एक राष्ट्रपति गणतन्त्र छ। वर्तमान तुर्कमेनिस्तान को राष्ट्रपति - Gurbanguly Berdimuhamedov।
देशको राजधानी - अश्गाकुरा शहर। आधिकारिक भाषा तुर्कमेन छ। देश को संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, बहुमत मुसलमान मा तुर्कमेनिस्तान को नागरिक हो हुनत।
देश 5.5 लाख मान्छे छन्। तिनीहरूलाई लगभग 80% - जनसंख्याको तुर्कमेन बाँकी 58 nationalities प्रतिनिधित्व छ। तिनीहरूलाई Uzbeks, रूसी, Kazakhs, Azerbaijanis र Tatars को सबै भन्दा।
तुर्कमेनिस्तान को झन्डा के हो
राष्ट्रिय झण्डा को सामान्य दृश्य 1992 मा अपनाए थियो। सानातिना परिवर्तन पछि यो 2001 मा पुन: अधिनियमित भएको थियो। दुई एक - यसको चौडाइ लम्बाइ एक अनुपात र चौडाई संग एक मानक आयताकार आकृति छ।
तुर्कमेनिस्तान को झन्डा को मुख्य रंग - हरियो। यो शान्ति, समृद्धि, सम्पन्नता, पृथ्वी र जीवन एक प्रतीक प्रतिनिधित्व गर्छ। बायाँ मा, कर्मचारी नजिकै, यो रातो पट्टी पार, र माथि, यो अर्को, पाँच तारा संग एक चन्द्रकला छ।
ahaltyke, Yomud-जेल, Saryk, Chovdur, Ersari: निम्न अनुक्रम मा तुर्कमेन गलैँचा गहने - रातो ब्यान्ड मा गोले चित्रण गरिएको। सँगै, तिनीहरू देश को पाँच क्षेत्रहरु प्रतिनिधित्व गर्छ। तर तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै मूल्य possesses। गोल "ahaltyke", उदाहरणका लागि, हाम्रो ग्रह को वार्षिक चक्र चित्रण गरिएको र saryksky gyol मृत्यु वा विगतमा प्रतिनिधित्व गर्छ।
रातो टेप को पक्ष मा पनि गलैँचा सीमाना जस्तै, एक आभूषण सुन रंग संग सजाया छ। यसको आधार मा सुनको जैतून शाखा प्रत्येक अन्य ओभरल्याप चित्रण गरिएको छ। तिनीहरूले राज्य तटस्थता र सार्वभौमिकताको अर्थ। माथिल्लो दायाँ कुनामा अर्धचन्द्राकार - शान्ति को एक चिन्ह र स्पष्ट आकाश। ताराहरू पनि देश को क्षेत्रमा संकेत र सेतो रंग निष्कपटता र Serenity एक प्रतीक हो।
राष्ट्रपति को मानक तुर्कमेनिस्तान को झन्डा भन्दा कुनै कम महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रतीक हो। यो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा पूरा को धरौटीको को राज्य र दयालु को नेता को मुख्य विशेषता हो। यो 1996 मा अपनाए थियो।
1 को अनुपात को राष्ट्रपति झण्डा मा दल: 1.5। आफ्नो ब्यानर, रूपमा राष्ट्रिय झण्डा मा साथै, हरियो। माथिल्लो बायाँ कुनामा, अर्को FLAGPOLE गर्न, यो सेतो अर्धचन्द्राकार र पाँच तारा छ। क्यानभासमा को सही पक्षमा पातलो सुन लाइन ठूलो सुन अष्टभुज देखाउँछ।
भित्र अष्टभुज पाँच टाउको एउटा चील छ। झन्डा मा बर्ड को छवि देशको heraldic परम्परा को निरन्तरता देखाउँछ। यो तुर्कमेन पुर्खाहरूको पौराणिक नेता को ब्यानर मा Oguz खान दुई-लाग्यौं चीललाई चित्रित थियो विश्वास छ।
को चुच्चो छेउमा देख तीन चीललाई टाउको, अन्य दुई दायाँ गरियो। आफ्नो पंजे पंजे मा शत्रु माथि विजय प्रतीक र राज्य रक्षा जो बाइसेप सर्प चरा, धारण। शीर्ष र तल फ्रेमहरू चीललाई एक लेखिएको: TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI (तुर्कमेनिस्तान को राष्ट्रपति)। वास्तवमा, एक पोल सामान्यतया देश को वर्तमान अध्यक्ष को नाम संग कुँदिएका एक चाँदी क्लिप छ।
रूस मा तुर्कमेनिस्तान को दूतावास
रूस मा, त्यहाँ भने देश दुई प्रतिनिधित्व छन्। मास्को, को Arbat जिल्ला, तुर्कमेन दूतावास स्थित छ, र Astrakhan को शहर मा वाणिज्य दुतको कार्यालय छ। दूतावास पूर्व अपार्टमेन्ट भवन मा स्थित। राजदूत Batyr Niyazliev - यो Filippovskiy लेन 22 रूस मा तुर्कमेनिस्तान मुख्य प्रतिनिधि मा स्थित छ।
संस्था धेरै विभाग छ। लघु Afanasyevskiy उहाँले अध्ययन जहाँ तुर्कमेन भाषा यो दूतावास, सांस्कृतिक केन्द्र मा प्रतिनिधि "तुर्कमेन एयरलाइन्स" छ र खुला आइतबार विद्यालय छ साथै लेन, 14,: Consular धारा मा स्थित छ।
एक जन्म प्रमाणपत्र म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्? आवश्यक कागजात सूची
औपचारिक - एक विशिष्ट त्रुटिपूर्ण?
बेलारुस: क्षेत्र, जनसंख्या, सहर
Centaury: औषधीय गुण
Multivarka मा पोलेको तरकारी: व्यञ्जनहरु
नाम Darina को अर्थ